တွေ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်စ.. Miracle | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » တွေ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်စ.. Miracle
တွေ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်စ.. Miracle
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 24, 2014 in Opinions & Discussion | 12 comments
ဆိတ်ညစ်တယ်ဗျာ.. လူတွေက ဘာတွေ ပြောနေဂျမှန်းလဲ အတိဝူး..။ ထူးအိမ်သင် ဆယ်နှစ်ပြည့်ပွဲမှာလည်း လျောက်ဝေဖန်လို့ အဆဲခံရပြီးပြီ။ ခုလည်း ဘာပြောလဲဆိုဒေါ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကိစ္စ… တကယ်ရှိမရှိ အနော်လဲမသိ။ နဂါးရှိမရှိ.. ဂမ္ဘီရပညာနဲ့ ရှာတာတကဏ္ဍ ထားလိုက်ဦး..။ ခေါင်းလောင်းကို ပိုက်ဆံသိန်း ထောင်ချီ အကုန်ခံလျှာလို့ ဘာထူးမှာလဲ ကွိကွိကွကွ ဝေဖန်ကြဗျံတော့ ဒီလောက်တောင် ညဏ်တိမ်ရသလား စဉ်းစားမိတယ်။ ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာ.. အရင်ကလဲလျှာ တွေ့မလို မတွေ့သလိုဖြစ်။ ခုတခေါက်တော့ သူ့နည်း သူ့ဟန်နဲ့ရှာတယ်။ မတွေ့လျင် ငွေကုန်တာ ဆုံးရှုံးတာ ငြင်းမရ။ ရှိလို့ တွေ့လျင်ဂေါ…။ ဇောင်းပေးချဉ်ထှာ တွေ့လို့ ဘာထူးမှာလဲ.. အလှပြယုန်သက်သက် ငွေကုန်ခံရသလား။ မရှိဆင်းရဲသားတွေ ပေးရမည့်ဥစ္စာကို ဘာညာသာတကာ ဆိုတော့.. သောက်ခွီး…။
ချီးဆားကြည့်ဂျလဗျာ… တွေ့ခဲ့လျင် မတွေ့ထားဦး ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထား ပြနိုင်လျင် ဒေါ်လာဘီလျံ တန်တဲ့ tourism attraction ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား။ ခေါင်းလောင်း ရေပေါ် ပေါ်မလာနဲ့ဦး.. အဲဒီမြစ်တဝိုက် လှေနဲ့ခေါ်ပြလျင်ကို ဒေသစီးပွားရေး တိုးတက်လာမြီ။ ခုတော့ဗျာ ပြောလိုက်ကြတာ..။
ဓမ္မစေတီ တဝရွှေပြည် ဗလနေခြည် ဓနဖြည်ဆည်
ဒါနဲ့ဆက်စပ်လို့ တကဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ ပေါပြမဲ။ အခြား ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ ဂဇက်သဂျီး အယာတိုလာခိုမ်မေနီ နဲ့ အခြားရုတ်ဝါဒီတွေ ဘာပေါလေ့ရှိသလဲဆိုလျင် ပုဂံမှာ စေတီပုထိုးတည်လို့ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးသတဲ့.. အဲဒီအထိ မှန်နိုင်တယ်။ သို့သော် အလဂါး အကျိုးမဲ့ ဖြစ်သယ် ဆိုဗျံတော့ လွန်သွားဗီ။ ခြီးဆားကြည့်စမ်း.. ပုဂံကြောင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လှသန်းရာချီ ရနေတာ အဟုတ်ဖူးလား။ တိုင်းပြည် ဂုဏ်သိက္ခာပါ ထည့်တွက်ကြည့်ရင် အောင်မငှီး ပုဂံပြည်သူပြည်သားများ နှစ်စဉ် အပူဇော် ခံထိုက်တယ်။ နို့မို့လျင် တိုင်းပြည်ယဉ်ကျေးမှုလက္ခဏာ လေထဲမှာ ပျောက်သွားမှာဂလား..။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးဆိုလဲ ပေါလိုက်ကြတာ.. တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးအမျိုး ကူမြူနစ်တွေကဆို သူတို့အာဏာရလျင် ရွှေတိဂုံ အပါအဝင် ဘုရားတွေရဲ့ ရွှေချွတ်ယူပြီး တိုင်းဗျီဘဏ္ဍာ လုပ်ပြစ်မတဲ့..။ အလွန်အကြူး ဖြစ်နေတာလဲ မှန်သာဗဲ.. သို့သော် အဲဒီ ဘုရားကြီးကပဲ နှစ်စဉ် သန်းထောင် ချီရှာပေးနေပြီ မဟုတ်လား။
သိရမှာ.. လောက ပညတ် အသုံးအနှုန်း အယူအဆ တွေသည် အမြဲမမှန်.. ခေတ်ကာလလိုက်လို့ ပြောင်းလဲ သွား၏။ မနေ့က ဆင်းရဲသည် ယနေ့ ချမ်းသာ ဖြစ်နိုင်သလို ယနေ့သုခသည်လဲ နက်ဖြန် ဒုက္ခအစ ဖြစ်နိုင်သီ။ တကယ် မရှိ မဟုတ်တဲ့ ပညတ်ချက်တွေကို ဟုတ်လှ မှန်လှပီ စွဲယူထင်မနေဗို့… သုံးယုန်သုံးပီး စွန့်တတ်ဖို့ လိုယင်းပါ။ ငါကွ….
လူ တစ်ယောက် တစ်ထောင် နဲ့ သဗ္ဖာန်သမား တွေ အလုပ်ဖြစ်နေတာကတော့ လက်တွေ့ပါ။
သူတို့ အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။
အခုဆို ကမ္တာ ကလဲ မြေပုံညွန်းမရှိ ဘုန်းဘုန်း အမိန့်ပေးတဲ့ အတိုင်း ဒိုက်ဘာ ဝတ်စုံတောင် ဝတ်မထားဘဲ ဘာမှ မမြင်ရတဲ့ ရွှံ့ရေထဲ စွပ်ကနဲ စွပ်ကနဲ ရေငုတ်နေကြ တဲ့ သူ တွေ ကို အတော်စိတ်ဝင်စားနေကြပါသတဲ့။
တွေ့များ တွေ့လို့ ကတော့ ဂင်းနစ် စံချိန် ဝင်ပြီဘဲ။
ခုအိမ်​မက်​​ပေးတယ်​တဲ့ ဆို​တော့ အိမ်​မက်​ထဲကအတိုင်းဆက်​လုပ်​ကြ​ပေါ့
တွေ့ရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုး ခံစားရမယ်
မတွေ့ရင်တော့ ငွေကုန် လူပန်းပေါ့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရာဇာဝင်တော့ တွင်မယ်ပေါ့
သိရမှာ.. လောက ပညတ် အသုံးအနှုန်း အယူအဆ တွေသည် အမြဲမမှန်.. ခေတ်ကာလလိုက်လို့ ပြောင်းလဲ သွား၏။ မနေ့က ဆင်းရဲသည် ယနေ့ ချမ်းသာ ဖြစ်နိုင်သလို ယနေ့သုခသည်လဲ နက်ဖြန် ဒုက္ခအစ ဖြစ်နိုင်သီ။ တကယ် မရှိ မဟုတ်တဲ့ ပညတ်ချက်တွေကို ဟုတ်လှ မှန်လှပီ စွဲယူထင်မနေဗို့…
ခေါင်းလောင်းမှန်ရင် မြည်သကွဲ့ မြေးလေးရဲ့။
တွေ့ဖို့ ရာနှုန်း ဘယ်လောက် သေချာတဲ့ နည်းကို သုံးနေတာလဲဟင် ???
တွေ့တာမတွေ့တာထက်.. လူထုငွေတွေနဲ့…အဲဒီကျနေတဲ့..ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုသိုက်တူးသွားမှာတော့ မပြောကြ…
အဲလောက်ခေါင်းလောင်.း.. အဲဒီခေတ်ကသွန်းနိုင်တဲ့.. .. စွမ်းအားရောရှိလို့လား…
သွန်းနိုင်တယ်ထားဦး.. သယ်တဲ့ငတုံးက.. တစစီဖြတ်တောက်မသယ်ပဲ.. အလုံးလိုက်သယ်ပါ့မလား…
တွေ့ခဲ့လျင် သဂျီးဦးမာမွတ် အနော့်ကို သမတ်တော်မလား…. မတွေ့လျင် ဦးမာမွတ်သမီး သန်ဆင်ခိုမ်နှင့် ဝေးရာ အပီးသွားမြီ… ငါကွ
27 August 2014 09:58(+0630) (လွန်ခဲ့သော2နာရီ ခန့်က)
ရေအောက်တွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄၀ဝ ကျော် နစ်မြုပ်နေခဲ့သော မွန်ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှာဖွေ တွေ့ရှိပြီးဟု ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးစံလင်းက လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီ IMNA သို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ခေါင်းလောင်းကို ရန်ကုန်မြစ်၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပုဇွန်တောင်ချောင်း တို့ဆုံစည်းရာ မြစ်ဆုံအနီး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုန်းပေါ်အရောက် အမြန်းဆုံးတင်နိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်ဟု ဦးစံလင်းက ဆိုသည်။
သူက “ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ထားပြီးပြီး၊ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဖြစ်ကြောင်းကို အားလုံးအတည်ပြုပြီးမှ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ ” ဟုပြောသည်။
အလေးချိန် ၁,၈၀,ဝဝဝ ပိဿာ (တန်ချိန် ၂၉၀) ရှိခေါင်းလောင်းကို ချက်ချင်းဆယ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံ ဆက်လက်တင်ပြပြီး ဆယ်ယူရန် ပြင်ဆင်ပြီးပါက သတင်းထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
“ ကျနော်တို့ အခု ပင်လယ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့လူအားလုံးအတည်ပြုပြီးပြီး၊ ဆယ်ယူဖို့ အတွက်ကို ကြိုးချည်နေတယ်၊ ဘယ်နေ့ ဆယ်ယူမှာကို မသိသေးဘူး” ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး အထောက်အကူပြု ဆပ်ကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဌ နိုင်မင်းအောင်က ပြောသည်။
ယင်းခေါင်းလောင်းကို ဦးစံလင်း ဦးဆောင်သော ရေငုပ်သမားများက ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိထားသော်လည်း ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း အမှန်တကယ် ဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သောကြောင့် သတင်းမထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ထိုသို့ဆယ်ယူရာတွင် ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ လူဦးရေ ၇၀ ဦးနှင့် ဆလုံရေငုပ်သမား ၁၀ ဦးတို့မှ တစ်ရက်လျှင် ရေထချိန် မနက်၊ ညနေ တစ် ကြိမ်စီ ငုပ်ပြီး၊ ရေစီးကြမ်းသည့်ရက်တွင် တစ်ရက် တစ်ကြိမ်သာ ငုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
မွန်ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ရှာဖွေ ခြင်းကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်မှ စတင်ရှာ ဖွေတူးဖော်နေခြင်းဖြစ်ကာ ရက်သတ္တ နှစ်ပတ် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၂၀ဝဝ နီးပါးခန့် အထိ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
သို့ရာတွင် ယခုတွေ့ရှိခဲ့သည်ဆိုသောအရာဝတ္တုမှာ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း အမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ် ကုန်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့်အခါမှသာ အတည်ပြုနိုင်မည်ဟု လေ့လာသူများက ပြောဆိုနေသည်။
၁၆ ရာစုခန့်တွင် ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဒီဗရစ်တို (ခေါ်) ငဇင်ကာက ရွှေတိဂုံ ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီးကို အမြှောက်လက်နက်သွန်းလုပ်ရန် ဖောင်ဖြင့်သယ်ယူစဉ် မြစ်သုံးခုဆုံရာအရပ်တွင် နစ်မြှုပ်ခဲ့ကြောင့် သမိုင်းမှတ်တမ်း တချို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရေးသားသူ: သတင်း > အေမီအောင်
ကိုရင်ကြောင်က.. ရက်ကုတ်(အင်္ဂလိပ်)တွေ ရွှေတိဂုံမှာရပ်နေတာရဲ့ဘေးက.. ခေါင်းလောင်းနဲ့.. ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း.. ရောချပုံတင်ထားသည်က..
အိုဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းလောင်းတွေ့ရင် ပေါ်တူဂီတွေကို တရားစွဲလို့ရဘီ။ ဒင်းတို့ ရေထဲချလို့ နှစ်ပေါင်းလေးရာ ခေါင်းလောင်းပျောက်နစ်နာမှု့နဲ့။ အောင်မယ်လေး လျှော်ကြေးကိုမနဲဘူးရမယ်ထင့်